Soo dejisan Baidu Antivirus 5.4.3.1489 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Baidu Antivirus
Baidu antivirus – software awood leh in aad computer ka hanjabaado kala duwan oo ay ilaaliyaan. Software wuxuu bixiyaa difaac ugu badan ee nidaamka, taas waxaa lagu gaarayaa iyada isticmaalka matoorada kala duwan. Baidu antivirus isticmaalaa modules kala duwan ee ammaanka ee aad computer, oo ay ku jiraan ilaalinta nidaamka, sidayaal xogta, macluumaadka ee soo dajinta, daalacashada iyo ka eegay Internet-ka. Sidoo kale antivirus si toos Wararka database in ay hubiso ilaalinta dadka ugu badan ee nidaamka ka hanjabaado kala duwan. Baidu lidka ku jira ay lana qamandhacyooto Jidhka kala duwan in la beddelo muuqaal u eg oo uu leeyahay si fudud loo isticmaali interface.
Isticmaal matoorada antivirus kala duwan
Badbaadinta laga helo noocyo kala duwan oo hanjabaad
Kabashada Automatic ah database
Soo dejisan Baidu Antivirus
Faallo ku saabsan Baidu Antivirus
Baidu Antivirus Xirfadaha la xiriira